आईपीएलमा खेलाडीहरुको लिलामी आजः सन्दीप कुन टोलीको पर्लान् ? - साँचो खबर
आईपीएलमा खेलाडीहरुको लिलामी आजः सन्दीप कुन टोलीको पर्लान् ?
फागुन ६ गते।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) १४ औँ सिजनको लागि लिलामी आज दिउँसो नेपाली समयअनुसार ३ः१५ बजे चेन्नाईमा हुँदैछ । यसका लागि २९२ जना खेलाडीहरुलाई सर्टलिस्ट गरिएको छ । ८ टोलीसँग ६१ जना खेलाडी खरिद गर्ने स्थान बाँकी छ । यसमध्ये पनि ४०–५० जना खेलाडी मात्र बिक्री हुने अनुमान लगाइएको छ ।
सबै टोलीको नजर अस्ट्रेलियाका अलराउन्डर ग्लेन म्याक्सवेल र न्यूजील्याण्डका काइल जेमिसनमाथि हुनेछ । लिलामीको शुरुवात ब्याट्सम्यानबाट हुदै अलराउन्डर,विकेटकिपर र बलरहरुमाथि बोली लगाइनेछ ।
भारतीय बैलर कुखुरा तस्करीहरु ले बर्डफ्लु को जोखिम बढाए